Nchọpụta ịchọ mma nke November
Ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ na ihu igwe November, ị nwere ike ịga ịzụ ahịa. Kedu ihe dị ọhụrụ site na Ngosiputa Ngwa na ụlọ nchebe?
"Karite" iji mepụta nchịkọta ọhụrụ, nke e bipụtara na mbipụta a kpaara ókè, ndị ọkachamara Occ Occane kwalitere ọdịnala Africa: ịkwanye nkata na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na omenala ochie. A na-eji ihe ịchọ mma na-adọrọ adọrọ mma nke nkwakọ ngwaahịa ahụ, nke yiri ya dịka nkata wicker. Ngwaahịa ọ bụla nwere mmanụ karite. Na egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, ọnụahịa ya bụ ruble 500, nwere 10% nke mmanụ na mmanụ aka, nke a bụ 400 rubles - 20%, na na a na-edozi ahụ cream maka ahụ ruru 1330 rubles. - 25%.
Na nchịkọta nke atọ aromas na-n'ihu: ngwaahịa na-esi ísì ụtọ petals, a mango osisi ifuru na ụbọchị bouquet. Tụkwasị na nke ahụ, nchịkọta gụnyere ncha, uru nke ire ere ga-ezigara ndị mmadụ bi na mba ndị ka na-emepe emepe n'ụzọ zuru ezu. N'afọ gara aga, ekele maka ọrụ a, a na-ahụ anya mmadụ 80,000 mmadụ, mmadụ 400 natara ọzụzụ ahụike.
Schwarzkopf emepụtawo ntutu ntutu dị mma nke nwere usoro mkpuchi. Nkpuchi Ucha, onye ego ya bu 240 rubles., A na-esecha isi awọ ma jiri ya mee ihe ngwa ngwa. Banyere curls, a na-elekọta ihe ndị na-ahụ maka.
Na obere obere usoro mgbụsị akwụkwọ a, a na-emepụta ihe nsure ọkụ ahụ bụ Demeter. Ha wee pụta n'ọtụtụ ísìsì, nke gụnyere ísì nke snow, mmiri ozuzo, ahịhịa ndụ na akwụkwọ akwụkwọ, yana isi ísì ọhụrụ. Maka ntakịrị karama 8.8 ml ị ga-akwụ ụgwọ 625 rubles. Uru ya dị na eziokwu na enwere ike ibu ya ọbụna obere akpaaka.
Ezigbo ihe edeturu bụ ihe ọhụrụ nke ísì ísì ísì ísì Escada, uru 2021 rubles. maka 30 ml. A na-esure ísì ụtọ nye rose. Nke a na-esi ísì ụtọ dị mfe, na-enye echiche nke okomoko. Ọ na-enyere aka ịhapụ onwe ya n'eziokwu, na-akpali omume obi ụtọ ma na-enye echiche nke nnwere onwe.
Amụma American Erite uru n'oge na-adịbeghị anya wepụtara otu ụdị ngwá ọrụ iji kee ụda zuru okè maka ihu. Ọ na-akpọ Atụmatụ Atụmatụ. Ọnụ ego ọ na-eri bụ 1449 rubles. O nwere ihe niile ị chọrọ: balm maka mbenata pores, kọmpat ntụ ntụ, isi ala na concealer. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na a na-etinye ihe omume nke obere ihe na setịpụrụ, nke ga-enyere gị aka ọ bụghị nanị iji họrọ n'ụzọ ziri ezi, kamakwa iji jikọta ego ndị a.
Kerastase na-eme ihe mgbe ọ gachara ahịa nke mmanụ isi mmanụ Elixir Ultimate na-eri 1800 rubles. wepụtara ihe ọzọ na-adọrọ mmasị, nke e gosipụtara na atọ dị iche iche. A haziri ha maka ụdị ntutu dị iche iche: nke mebiri emebi, nke dị nro na nke dị mkpa, yana agba ntutu.
Ndị ọkà mmụta sayensị nke ụlọ ọrụ Splat tọhapụrụ otu ụdị ngwaahịa - onye nha nha nha na onye na-ezipụ ihe. A na-eche ha maka ndị na-ese anwụrụ ọkụ, na-ahọrọ tii siri ike, kọfị ma na-aṅụ mmanya na-acha ọbara ọbara. Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na mkpuchi ụtaba yiri nke amba na ya. Nke a pụtara na ọ nwere ike gbasaa, na-emerụghị enamel ahụ. Ekele maka nchọpụta DE-SMOKE a, nke na-agụnye mkpụrụ osisi ise, nke na-ekpochapụ ihe oyiyi dị arọ, na-enweghị mmebi nke enamel ahụ. PRO-WHITER, nke na-efu nanị 292 rubles, adịghị enwe akwa akwa etemeete, abrasive siri ike, ihe ndị nwere ike imerụ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ahụ mmadụ. Ngwaahịa dị na nhazi abụọ. OZI dị mma maka iji ụbọchị kwa ụbọchị, na NWA - maka ịnọgide na-arụpụta na ngwa ngwa.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị na-atụgharị na ndị na-agwọ ọrịa maka isi ọwụwa nwere nsogbu na gburugburu ebe dị anya. N'ihi ya, ndị ọkà mmụta sayensị kere ngwaahịa Rylis LADY, nke ọnụ ahịa ya dị 3200 rubles. Nke a bụ ụdị Viagra maka ụmụ nwanyị. Ihe mgbagwoju a abughi nani inye aka n 'onu ogugu, kama o na - ewusi ihe nchebe nke ahu. Enweghị hormonụ na ya. Kama nke ahụ, ha nwere ihe ndị sitere n'okike. O kwesịkwara icheta na nkwakọ ngwaahịa ahụ enweghị ihe ngosi nke nsogbu ahụ.
Ndị na-ahụ n'anya na-ahụ Vera Brezhnev ọ bụghị nanị maka ihe okike ya, kamakwa maka ịma mma ya pụrụ iche. Vera ghọrọ nke a n'oge mgbụsị akwụkwọ ihu nke ọgbara ọhụrụ nke ịchọ mma ịchọ mma Luxe Avon. Ekwesiri ighota na maka okike nke a, anyi jiri usoro ndi nwere ihe ndi di oke nma: ihe ndi ozo, ihe ndi ozo silk, ihe ndi ocha na agba sapphires. Ihe niile a na-enye gị ohere ịmepụta ihe oyiyi na-enweghị atụ.
Ọhụụ ọhụrụ Forever Blonde, nke na-efu site na 1000 rubles., Na-apụta kpọmkwem maka ụmụ agbọghọ agbụ. Ọ na-ejikọta mkpụrụ ndụ nke keratin, nke na-ekpuchi nke ọ bụla na-ekpuchi.
Herbal na-ewepụta ihe dị iche iche
Otu esi eme ihe n 'uz o ziri ezi
Ndị na-arịa ọrịa na-esi ísì ụtọ
Ihe ịchọ mma ịchọ mma maka ihe ịchọ mma
Kedu ka esi esi ísì ísì siri ike?
Akụkọ ihe mere eme Max Factor
Ụkpụrụ nke ude mmiri ahụ
Kedu otu esi eme ka ulo di nma maka afo ohuru?
Kuki kuki chocolate
Ọ bụ Svetlana Loboda ka e bu ụzọ kpoo ya na nwa ya nwanyị
Ulo ogwu di iche iche maka oke ocha
Nri ala-osikapa casserole na raspberries
Kedu ihe mere ị ga-eji chọọ mma
Oral mmekọahụ - French ịhụnanya
Onye TV na-egosi TV Svetlana Volnova
Nri ofe ọkụkọ
Chocolate biscuits na cherị
Nri kachasị mma ma bara uru
Ilya Glinnikov na Katya Nikulina na-akwadebe maka agbamakwụkwọ ahụ
Aromatherapy na oyi: oyi mkpa mmanụ
Musaka na eggplant